Yaan nahay | Shijiazhuang Neming Soo Dejinta & Dhoofinta Co., Ltd.
Iibkeena ayaa hoos udhacay. waxay ku siin doontaa xiriir waqtiyeysan si loo hubiyo in su'aalahaaga laga jawaabi karo ama arrimo kasta lagu xallin karo waqtiga ugu horreeya.
QCyaga ayaa hoos u dhacay. waxay kormeeri doontaa wax soo saarka oo dhan si loo hubiyo in amar kasta loo soo saaro sida macaamilku u codsado.
Muunaddeena tijaabada ah leh khibrad sameeyayaal. Adeegga 'bespoke service' ayaa la bixiyaa. Dharkaaga gaarka ah waxaa loo qaabeyn karaa sida naqshadeyntaada / shaybaarkaaga ama sawir ama fikrad kaa timid.
Dharka & qalabka aan adeegsaneyno waa mid deegaanka u roon, AZO waa bilaash, waxyeello uma geysaneyso jirka. Waxaa shahaado ka haysta OEKOTEX-100, BLUESIGN iwm.
Inta lagu jiro wax soo saarka, shaqaalaheena QC waxay sameeyaan xakameyn tayo leh oo adag sida macaamiisha codsato. Baadhitaan aan kala sooc lahayn ayaa la sameeyaa .Haddii aan helno wax arrin ah, isla markiiba waa la xallin karaa.
Ka hor bixinta, waxaan raacnaa heerka baaritaanka heerka AQL ee II. Waxaan hubin doonnaa badeecadaha la keenay cillad la'aan waxaana la kulmi doonnaa qanacsanaanta macaamiisha.
Suuqayaga & Macaamiilkeena
Badeecadeenu waxay u iibgeysaa Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub, Oceania iwm Qiimaha Dhex-dhexaadka ah, xakamaynta tayada adag, keenista waqtiga ku habboon waxay naga dhigeysaa inaan dhisno iskaashi muddo-dheer ah oo lala yeelanayo Kappa, All Blacks, MUFC, GUINNESS, GAA, RIRA iwm.
Waxaan leenahay awood gaadiid oo xoog leh oo aan ku fulin karno bixinta waqtiga ku habboon badda ama hawada. Sidoo kale, waxaan wada shaqeyn dheer la leenahay shirkadda xawaaraha, sida FEDEX, TNT, UPS, DHL.
Waxaan ixtiraameynaa xuquuqda aadanaha; hubiyo sharafta iyo daryeelka shaqaalaha; WALIGE ha isticmaalin shaqooyinka carruurta.
Waxaan sidoo kale la qabatimay ilaalinta deegaanka, howlaha samafalka iwm.